सफलताकाे कथा : पुष्प व्यवसायबाट मासिक तीन लाख आम्दानी !
ऋतु काफ्ले शुक्रबार​, मङ्सिर २७ २०७६
काठमाडौँ । मान्छेलाई मन पर्ने तीन कुरा, संगीत, बच्चा र फूल । यी कुरा मान्छेलाई मात्रै होइन, भगवानलाई समेत मन पर्छन । र त मन्दिरमा भजन गाइन्छ । फूल बर्साइन्छ । अनि मानिसलाई आशिष मिल्छ । भगवानबाट आशिष लिन पहिला पुष्पगुच्छा चढाउनुपर्ने मान्यता धानेकी छिन, काठमाडौँ मैतिदेवकी लक्ष्मी महर्जनले । दुई दशकदेखि पुष्प व्यवसायमा रमाइरहेकी लक्ष्मीका फूलले मैतीदेवी मन्दिर सजिएको छ ।
काठमाडौँ । मान्छेलाई मन पर्ने तीन कुरा, संगीत, बच्चा र फूल । यी कुरा मान्छेलाई मात्रै होइन, भगवानलाई समेत मन पर्छन । र त मन्दिरमा भजन गाइन्छ । फूल बर्साइन्छ । अनि मानिसलाई आशिष मिल्छ ।
भगवानबाट आशिष लिन पहिला पुष्पगुच्छा चढाउनुपर्ने मान्यता धानेकी छिन, काठमाडौँ मैतिदेवकी लक्ष्मी महर्जनले । दुई दशकदेखि पुष्प व्यवसायमा रमाइरहेकी लक्ष्मीका फूलले मैतीदेवी मन्दिर सजिएको छ । देवता खुशी भएका छन । मानिसहरुले सोचेको पुगेको छ । तर देउतालाई खुशी बनाउने लक्ष्मीको फूलखेती व्यवसायको कथा भने पृथक छ ।
प्रेरणा दाजु भाउजु, खुशी आफ्नो !
काठमाडौकी रैथाने लक्ष्मी पहिले पहिले फूलखेती व्यवसाय सामान्य ठान्थिन । जतिबेला उनका जेठाजु र जेठानीले फूलखेती व्यवसायलाई प्रमुख आम्दानीको स्रोत बनाइरहेका थिए । आफूले अरु अरु काम गरेपनि फूलखेती पट्टि उनको ध्यान गएकै थिएन ।
जब मन्दिरमा फूल चढाउने लस्कर उनका आँखाले दैनिक देख्न थाले । तीन फूलका पुष्पगुच्छाले देउता खुशी हुन थाले । उनको मन पनि फूलबाट लोभियो । अझ भनौ मानिसको जीवन खुशी बनाउन मिल्ने फूलले आफ्नो जीवन कसो नचल्ला र ? लक्ष्मीले यही प्रश्नबाट फूलखेतीमा होमिने निर्णय गरिन ।
जतिबेला उनका जेठाजु र जेठानीले फूलखेतीको नर्सरी चलाउन विकल्प खोजिरहेका थिए । पारिवारिक सरसल्लाह र जिम्मेवारीले सहज हुने ठानेपछि उनीहरुले लक्ष्मीलाई नै नर्सरीको जिम्मा दिन उपयुक्त ठाने ।
जेठाजु र जेठानीले दिएको जिम्मेवारी लक्ष्मीले स्वीकारिन । अनि देउता खुशी बनाउन चाहिने फूलको रंगीविरंगी संसारमा रमाउदै गइन । जुन बगैँचामा खुशी पनि छ । दुःख पनि छ ।
तर मानिसहरु फूलका पुष्पगुच्छा बोकेर मन्दिरमा आशिष लिन लाम लाग्दा लक्ष्मीको मेहनतले गगन चुम्छ । निधारमा खुशीका रेखा दौडिन्छन ।
‘रङ्गीविरङ्गी फूलहरु देखेपछि कसको पो मन लोभिदैन र’ प्रतिप्रश्न गर्दै लक्ष्मी भन्छिन, ‘थरीथरीका फूल देखेर मान्छे मात्रै होइनन । मन्दिरका देउता र भगवान पनि खुशी भएका छन ।’
काठमाडौँ महानगरपालीका –३० मैतिदेवीमा लक्ष्मीको यो नर्सरी २० बर्षदेखि सञ्चालनमा छ । मैतिदेवी मन्दिरसँगै जोडिएको तिन रोपनी जग्गा उनले ‘लिज’मा लिएर उनले फैलाएको नर्सरी एक दशक पुग्न थाल्यो ।
‘दाजु भाउजुले मुख्य आम्दानीको स्रोत यही नर्सरीलाई बनाउनु भएको थियो । उहाँहरुबाट नै प्रेरित भएर मैले चलाउन शुरु गरेकी हुँ । अहिले सोचेभन्दा पनि राम्रो आम्दानी छ’ प्रसन्न मुद्रामा लक्ष्मीले भनिन ।
काठमाडौँमा मात्रै हजारको हाराहारीमा पुष्प व्यवसायी छन । शुरु शुरुमा काठमाडौँका रैथानेले चलाउँदै आएको पुष्प व्यवसाय अहिले झण्डै ५० जिल्लामा फैलिएको छ ।
पुष्पखेतीको विकास र विस्तार भएपछि भारतबाट आयात हुने फूलको परिमाण घटेको । आत्मनिर्भरता पनि बढको छ । जसका पछाडी लक्ष्मी जस्ता पुष्पव्यवसायीको हात छ ।
लक्ष्मीका नर्सरीमा स्वदेशी मात्रै होइन । अहिले विदेशी प्रजातीका फूलहरु पनि पाइन्छन । जुन विकासशिल देशबाट ल्याइएका हुन । नेपालमा हुर्काएर नेपालीलाई विदेशी प्रजातीका आकर्षका पुष्पगुच्छा सजाउन सहज भएको छ ।
त्यसमध्ये ‘डेन्थस’, ‘पिटनीया’, ‘पेन्जी’, ‘गाजनिया’ जस्ता प्रजातीका फूल उनका नर्सरी विभिन्न रंगमा फूलेका छन । लक्ष्मीका अनुसार यी फूल थाइल्याण्ड, होल्याण्ड, नेदरल्यान्ड्स, अमेरिका र चीनबाट भित्र्याइएका हुन ।
लक्ष्मीले उत्पादन गरेका फूलहरु मैतीदेवी मन्दिर मात्रै होइन उपत्यका बाहिर धरान, झापा, पोखरा, हेटौँडासम्म फैलिएका छन ।
गाह्रो साह्रो पनि छ !
फूलखेती बाह्रैमास फस्टाउने व्यवसाय पनि हो । तर बाह्रैमास फस्टाउनलाई मेहनत पनि उत्तिकै चाहिन्छ । त्यसमाथि फूलको विशेषताअनुसार त्यसको बोट र फूलमा ल्याउन त्यत्तिकै मेहनत गर्नुपर्छ ।
बर्षातमा पानी धेरै पर्ने भएकाले फूल जोगाउन केही गाह्रो छ । जुन स्वभाविक पनि हो । तर हिउँदमा भने सहज नै हुन्छ ।
‘बर्षात र हुरीबतास आउने बेला फूलका बेर्ना जोगाउन केही समस्या हुन्छ’, पुष्पव्यवसायीका गाह्रा फुकाउदै लक्ष्मी भन्छिन, ‘बर्षाले बोट गलाउने र हुरीले टहरा भत्काउनबाट जोगाउनुपर्छ । अरु बेला त्यति समस्या हुदैन । तर हेरचाह मान्छेको भन्दा धेरै गर्नुपर्छ ।’
सानो लगानी, मासिक तीन लाख आम्दानी !
लक्ष्मीले नर्सरी नै चलाएपनि सानै लगानीबाट उनको परिवारको पुष्पखेती शुरु भएको हो । यति नै भन्ने एकिन नभएपनि केही हजारबाट शुरु भएको व्यवसाय अहिले लाखौको कारोबारसम्म पुगेको छ ।
मासिक उनले ७० हजार रुपैयाँ जमीनको ‘भाडा’ मात्रै बुझाउँदा तीन लाख आम्दानी गर्छिन । जुन औषतभन्दा निकै राम्रो हो । यसलाई थप व्यवस्थित पार्ने लक्ष्मीको योजना पनि छ ।
नर्सरीमा ११ जनाले रोजगारी पाएका छन । पुरुषका साथमा चार जना महिला पनि दैनिक नर्सरी हेरचाहमा खटिएका छन । वैदेशिक रोजगारीका लागि लाम लागेको युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिनु लक्ष्मीको दायित्व बनेको छ । तर यतापट्टि सरकारले गम्भिर भएर नसोच्दा उनको मन खिन्न बन्छ ।
‘सानोतिनो व्यवसाय वा रोजगारी दिन सके युवाहरु खाडी जान पर्ने थिएन । खाडी जान मात्रै होइन । कोही कोही बन्द बाकसमा फिर्ता हुनुपर्ने पनि थिएन’ आम युवाको समस्या बुझेकी लक्ष्मी अगाडी थप्छिन, ‘तर सरकारले युवाको समस्या बुझेर रोजगारी दिन पर्याप्त लगानी र अवसर नै सिर्जना गर्न सक्दैन ।’
साना व्यवसायीलाई प्रोत्साहन, रोजगारी सिर्जनामा लगानी र सस्तो ब्याजदरमा बैंकबाट ऋण तथा अनुदान दिन सके देशको अर्थतन्त्र बलियो भएर युवाहरु स्वदेशमै रमाउने वातावरण बन्ने सम्भावना लक्ष्मीले देखेकी छन । तर यसका लागि आम युवाहरुले जोखिम लिनुपर्ने र सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
‘सबै कुरा सरकारले गर्दैन । केही जोखिम आफूले पनि लिन सक्नुपर्छ’ लक्ष्मी युवाहरुलाई साहस दिदै अगाडी भन्छिन, ‘तर सरकारले सहयोग नगरीकन रोजगारी सिर्जना गर्न सकिदैन । तसर्थ युवाहरुले पनि रचनात्मक ढंगले सोचेर सानोतिनो व्यवसाय शुरु गर्नुपर्छ ।’
हेमराज सुवेदी १३ दिन अगाडी